Uthwele kanzima umndeni wentombazane enenkinga yokuvutha | isiZulu
Uthwele kanzima umndeni wentombazane enenkinga yokuvutha
Kubanjwe 'umthakathi' enqunu efulethini
Usabise amaphoyisa ngenyoka obengafuni ukuboshwa
Bayavela abasolwa ngokubulala 'umthakathi' KwaMashu
Durban - Kubanjwa kuyayekwa emndenini wakwaNdawonde eMuden, maphakathi neKwaZulu-Natal, osuphelelwe yizindlu okuthi uma kuke kwangena indodakazi yakhona ilandelwe wumlilo okusolwa ukuthi udalwa wukuthi iloywe ngesilwane.
Lo mndeni usenkingeni njengoba uthi kawusazi ukuthi kumele wenzenjani ngoba usuhambe abantu abaningi abathandazayo kuzanywa izaba kodwa lutho umehluko.
ILANGA lizifikele mathupha kulo mndeni obuhleli endlini eyodwa esisele, lathola ukuthi udliwa yingebhe njengoba ngoLwesihlanu kushe izindlu ezimbili ezifulelwe ngotshani zaba wumlotha kwathi ngeSonto kwasha enye nempahla yonke phakathi.
Umndeni uthi lokhu kugula okuhlasele indodakazi yawo enguNkz Nompilo Ndawonde, 18, sekuholele ekutheni nomphakathi usabe ngisho ukusondela kuwona. Kuthiwa le nto iqale ukwenzeka kuNkz Ndawonde ngonyaka odlule ekoninalume oPhathe, lapho abefunda khona.
Kuvela ukuthi kulahleke isicathulo sakhe sesikole wabe esephathwa yizinyawo. Emuva kwezinsukwana uvuke ekuseni esegcatshwe umzimba wonke, izinhlanga zisezintsha zisavuza igazi. Ngakusasa lo mndeni uthi uvuke ekuseni izimpahla zikaNkz Ndawonde sezibethelwe emnyango wena owabona isikhumba sembuzi uma kuhlatshiwe.
Unina kaNkz Ndawonde, uNkz Nelisiwe Langa, 43, uthi kumhlukumeze kakhulu okwenzeka enganeni yakhe wabe eseyihambisa esontweni yakhulekelwa kwathiwa kakukho lutho oluzokwenzeka.
Uthi emuva kwesikhashana kade kukhulekiwe, kuvele kwavutha isikhwama sengane yakhe iya esikoleni, okuyilapho eqale khona ukubona ukuthi kukhona okushaya amanzi.
Utshele ILANGA ukuthi akapholisanga maseko, uvele wanikela KwaNobamba, eWeenen, kumthandazi kwathi uma ingena endlini indodakazi yakhe, yasha yaphela.
"Umthandazi uthe naye uyehluleka ngoba bese kushe indlu wabona ukuthi zizophela nya izindlu zakhe. Ngiyithathile ingane ngayoyilaphela ekhaya lapho ngizalwa khona, nakhona kwasha izindlu ezimbili. Ngiyithuthile ngayohlala nayo la ngiqube khona ngokwetoho, nakhona kwaba yiso leso, yasha yaphela indlu," kusho uNkz Langa.
Umndeni uthi uma kuke kwangena le ndodakazi yawo endlini, kulandela umlilo ngemuva. Uveze nokuthi kawusenayo nemali, kuvele kuse ingekho esikhwameni. Isikhwama sitholwa sesilahlwe emnyango kanti kwesinye isikhathi bayibona isibekwe phezu kwetafula, singasekho isikhwama.
"Uma sekuqubuke umlilo kakuphumi lutho ngendlela onelangabi ngakhona. Uma nje uke wathi umemeza abantu, kuvele kube sengathi uwubasela kakhulu. NgeSonto kushe nezimpahla zesikole zezingane, kangisazi kumele ngenzenjani, ngiyafisa ukuthola abantu abangangisiza. Kwesinye isikhathi silala sinamafoni sivuke engasekho, siwabheke size siyeke. Kuyothi ngakusasa siwabone esebuyile," kusho uNkz Langa.
ILANGA lifike kubekwe imali engango-R200 etafuleni othe umndeni uyasaba ukuyisebenzisa ngoba ibinyamalele yabonakala isibekwe phezu kwekhabethe. UNkz Ndawonde uthi akukho buhlungu abuzwayo emzimbeni.
"Le nto engiphethe ingenza nami ngisabe manje ukuphila emphakathini. Ngelinye ilanga ngivuke ekuseni nginomuthi omnyama olimi, ebengizwile ngifunzwa wona ebusuku," kusho uNkz Ndawonde.
Le ndaba idumile kule ndawo, kubatshazwa umhlola wento engakaze ibonakale.
UMnu Sazi Mhlongo ongumholi wabelaphi bendabuko KwaZulu-Natal, uthi lo mndeni ubhekene nenkanankana yomthakathi. “Ingane ithunyelelwe ngesibango esihambisana novutha. Ngingabasiza ngezaba bese bebona-ke ukuthi kawukho yini umehluko," kusho uMnu Mhlongo.